ရေခဲသေတ္တာ မရလို့ သောင်းကျန်းတဲ့ ကိုဗစ်လူနာနဲ့ အစိုးရရဲ့ အလုံးစုံစိုက်ထုတ်ကုန်ကျရမှု - Zet Star
ရေခဲသေတ္တာ မရလို့ သောင်းကျန်းတဲ့ ကိုဗစ်လူနာနဲ့ အစိုးရရဲ့ အလုံးစုံစိုက်ထုတ်ကုန်ကျရမှု
December 7, 2020 ZCC News	0 Comments
ကျွန်မ ကိုယ် ကျွန်မ အရင် မိတ်ဆက်ပါရစေ ကျွန်မက အောင်မြင့်မိုရ် ကိုဗစ် ကုသရေးစင်တာ က အောက်ခြေသိမ်းလုပ်ပေးနေတဲ့ Volunteers တစ်ယောက်ပါရှင့်
လူနာတစ်ယောက်ကို စောင်၊ ခေါင်းအုံး၊ ခေါင်းအုံးအစွပ်၊ ခြင်ထောင်၊ မွေ့ယာ၊ မွေ့ယာအခင်း အဲ့ပစ္စည်းတွေ ကို လူနာတစ်ယောပ်ဆင်းတာနဲ့ အကုန် အမှိုက်ထဲ စွန့်ပစ်ရတယ် နောက်လူနာအတွက်ဆိုပြီး ပြန်မသုံးပါဘူး။
ရေခွပ် ရေမှုတ် ရေဇလား သွားတိုက်ဆေး သွားတိုက်တံ၊ ဆပ်ပြာမှုန့် ဆပ်ပြာတုံး အကြမ်း/အချော ၃ မိနစ်အိုး ပေါင်းအိုး TV ဆန် ကြက်ဥ အကဒ်လိုက် မားမား အချိုရည် အခြားမုန့် မျိုးစုံ ရေသန့် Mask. oxygen . ဆီးချို သွေးချိုစက် သွေးပေါင်ချိန်စက် ဓာတ်ခဲလိုရင်လိုသလို ထုတ်ပေးတယ်။
အခြားဆေးအမျိုးမျိုး တစ်နေ့ ထမင်း ၃ နပ် ကျွေးတယ် တချို့ ထမင်းရော ဆန်ပြုတ်ပါ ပို့ပေးတယ်။ အခန်းထဲမှာလည်း အဲကွန်း ထားပေးတယ် လူနာတွေ ဘာလိုလဲ လိုတာအကုန်တင်ပေးရတယ် ဖိနပ်ကအစ ကျန်းမာရေး ဖိနပ်ပါ ထုတ်ပေးသေးတယ်။
သူတို့ တစ်နေ့တာအတွက် စွန့်ပစ်ဖို့ အမှိုက်အိတ် နေ့တိုင်းပေးရတယ် တစ်နေ့အမှိုက် တစ်နေ့ပစ်ဖို့ မှာထားတယ် ဒီကြားထဲ လူကြီး ကလေး ဒိုက်ဘာ လိုအပ်ရင် သုံးဖို့အဆင်သင့် ဒါက လူနာတွေတိုရိုက်သုံးတဲ့ ပစ္စည်း။
လူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့ Volunteers တွေ မဖြစ်မနေ သုံးရတဲ့ ပစ္စည်း PPE အစုံလိုက် ပိုးသတ်ဆေးပုံး Volunteers တွေနေဖို့အခန်း အသုံးအဆောင် အောက်ခြေသိမ်းအကုန် ထုတ်ပေးတယ် တစ်ရက် တစ်ရက် ကား ဆီဖြည့်ရတာတွေရော ယာယီအဆောက်အအုံတွေအတွက် အမိုးအကာက စ၍ ကုန်ကျစရိတ်ထဲ အကုန်ထည့်ရပါတယ်။
ဘယ်အရာမှ အလကားမရပါဘူး အမှားပါရင်လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်အကြံပြုနိုင်ပါတယ် ကျွန်မတို့ Volunteers တွေကို အမြဲမှာလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခွန် လူနာတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားပေးပါတဲ့ လိုအပ်တာအကုန်ပြောပါတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တာက လွဲရင်ပေါ့။
တချို့ဆို ရေခဲသေတ္တာက အစတောင်းလို့ မရလို့ဆိုပြီး သောင်းကျန်းလို့ မရရအောင် ရှာပေးခဲ့ရဖူးတယ်။ လက်တွေ့ပဲ ဒါကျွန်မ မအားလို့ အကြမ်းအားဖြင့်ပဲ ရေးတာတောင် ဒီထက်ပိုပြီး အသေးစိတ် အချိန်ရရင် ရေးပေးပါမယ် လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ပါအကြံပြုပါ မှားတာရှိရင်လည်းထောက်ပြပါ
← မြန်မာနဲ့ ရွှေလီဆန်ကုန်သည်တွေဆီက သန်းတသောင်းကျော်လိမ်သွားတဲ့ “လော်ကြံဖန်”
ရုတ်တရက် အသက်ကယ်ဖို့ လိုအပ်လာတဲ့ ကိုဗစ်လူနာတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုံခြုံမှု →